अंगिकृत बुहारी माथी शंका गर्नेहरु योग गर्दा राम्रो होला, किनकी यो सोच एक प्रकारको मनोरोग नै हो
विजेता झा, जनकपुरधाम
योग दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने एउटा मनोरोग छाएको छ । त्यो हो आफनो देश परित्याग र परिवारलाई समेत छाडेर आएकी आफनै बुहारी माथीको विभेद । सात वर्षमा राष्ट्रवादी बनाउनु छ भन्ने तर्कलाई म मनोरोग भन्दा अरु केहि भन्न सक्दिन ।
अन्तराष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा सर्व प्रथम योगको बारेमा केहि शेयर गर्ने जर्मको गर्दछु । श्रीमद भागवत गितामा उल्लेख छ, ‘कर्मसु कोशलम इति योगम’ अर्थात कर्मको कुशलतालाई नै योग भनिन्छ भनिएको हो । तर जव कर्म कुकर्म तिर जान्छ त्यहाँ योगको आवयश्कता पर्ने नै भयो । योगले शारिरिक मानसिक सन्तुलन कायम राख्दछ जस्ले स्वस्थ्य रहन मद्दत गर्दछ । मेडिटेशन पनि योगकै एक अंशको जस्ले स्मरण क्षमता बढाउछ र मनलाई शान्त गरि जिवनलाई खुसी बनाउछ ।
शरिरमा रक्तसञ्चारलाई सन्तुलित बनाई रक्त विकास र मनोविज्ञानमा समेत योगको भुमिका हुन्छ । विश्वको खोज र अनुसन्धानवाट बुझिएको कुरा कोरोना महामारीवाट लडन र बाँच्न अहिले सम्म व्यक्तिगत शारिरिक क्षमता दक्षता नै एक मात्र विकल्प हो । अहिलेको समयमा घरमा परिवारका साथ योग गरियो भने त्यसले घरमा योगको संस्कार विकास गर्छ जो कि परिवारकै लागि फाइदाजनक हुनेछ । दिनको सुरुवात योगवाट भए दिन र रात पनि जो कोहिका लाग कुशल र सुखमय हुने प्रमाणित तथ्य हो ।
योगलाई चिनेर यस्को महत्व बुझनु र गाँउ वास कपास जस्तै यसलाई चौथा आवयश्कताको रुपमा लिनु नै मानवजातीको हितमा देखिन्छ । तसर्थ समग्र व्यक्तित्व विकास र पारिवारिक सुखका लागि समेत योग नभई नहुने जिच सावित भइसकेको छ । विश्व समुदायले यसलाई अपनाइ सकेको छ ।
छोरी बचाउन नसक्ने तर बुहारी माथी शंका गर्ने ?
नेपालमा अहिले नागरिकता कानुनको पनि खुवै चर्चा छ । नेपाल सरकारको पनि गजवको निति छ । छोरी (निर्मला पन्त) माथी बलात्कार र हत्या हुँदा केहि गर्न नसक्ने सरकार बुहारीको राष्ट्रियता माथी समेत शंका गर्न थालेपछि यो सरकारलाई के भन्ने ? छोरी बचाउन नसक्ने बुहारीलाई आफनो भन्न नसक्ने वाह ! पुरुष प्रधान देश भनेर सुनेको थिए तर यो त पुरुष प्रधान भन्दा पनि महिला विरोधी चरित्रको देखियो । यहाँ राष्ट्रपतीको उदाहरण आउँला तर म पनि पुर्व उपसभामुखको उदाहरण दिन्छु, विर्तकलाई तर्कले हराउनै पर्छ ।
तर मैले बुझेको अनुसार यो देश पुरुष र महिला भन्दा हुने खानेहरुको देश हो । जो बाहुबली छन् उस्को परिवार चाहे महिला होस या पुरुष यो देशमा रजाई गरिरहेको अनेकन उदाहरण छन त्यसमा डिभेट गर्न सकिन्छ । यो देश ति महिलाको लागि हो जस्को पावर चल्छ । पावर पुग्ने महिलाले बिना श्रीमान जन्माएको बच्चा पनि बंशज हुने तर संस्कार पुर्वक गरिएको विवाह सात वर्ष पछि मात्र आधारिकता पाइने देश भन्दा पनि हुने भयो । धेरै परिवर्तणहरु भए त्यसमा जनताकै योगदान छ तर जनताले ति पुराना चेहराहरु बदल्न सकेन उसलाई नै नेतृत्व मानेकाले अहिले पुन ः देश पछाडि गइरहेको छ । त्यसैले कसैलाई अविश्वास गर्नु भन्दा विश्वासको वातावरण बनाउन आवयश्क छ नभए देशमा समाजिक सदभाव र आपसी एकताको परिकल्पना गर्नु मुर्खता हुनेछ । धन्यवाद